Ikhaya Lamaholide Elithandekayo eReith im Alpbachtal elineGadi
Hlala kuleli khaya lamaholide elihle e-Austrian Reith im Alpbachtal ukuze uthole iholide lezemidlalo lasebusika elinemindeni emi-2. Inengadi ethokomele kanye namagumbi okulala angu-4 anethezekile angakwazi ukuhlalisa abantu abayi-10 ngokuhlanganyela.
Idolobhana lezemidlalo lasebusika laseReith im Alpbachtal linamakhilomitha angama-93 wemithambeka yokushushuluza. Kukhona futhi i-50 km yezindlela ezinhle zokuhamba izintaba ukuze ukwazi ukuhlehla eqhweni usendleleni eya ekubukeni okumangalisayo. I-Reith im Alpbachtal iyindawo efanelekile ikakhulukazi yomshushuluzi osanda kuqala.
Leli khaya linekhishi elihlome kahle kanye namagumbi okulala anemibhede ethokomele. Ungakwazi ukujabulela ukudla okulula nesiphuzo engadini futhi indawo elungele izingane inamagumbi okugeza angu-3, engu-1 yawo eneshawa yesitimu.
Isakhiwo: Isitezi esiphansi: (Igumbi lokuhlala(i-TV, indawo yokuhlala), Ikhishi(umshini wekhofi, ihhavini, i-microwave, ifriji-isiqandisi), igumbi lokulala(umbhede okabili), igumbi lokugezela(ubhavu noma ishawa), igumbi lokugezela(isitsha sokuwasha, indlu yangasese, umshini wokuwasha ))
Esitezi sokuqala: (igumbi lokulala(umbhede owodwa, umbhede ophindwe kabili), igumbi lokulala(umbhede okabili), igumbi lokulala(umbhede owodwa, umbhede wabantu ababili), igumbi lokugezela(ishawa yokuphefumula))
kuvulandi noma ithala, ingadi